#प्रचण्ड Archives - Current Nepal News
असोज १५,काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्। राम्रो विचारधारा, कार्यदिशा बोकेको, राम्रो काम गरेर आउने साथीलाई बाटो छोडिदिने उनको भनाइ छ। अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)को २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले योग्य व्यक्ति आए आफूले जिम्मेवारीबाट बिदा लिन चाहेको बताए। ‘माओवादीभित्रै प्रचण्डको काम छैन, आफैँ अघि बढ्नुपर्यो भन्ने सुनिन्छ। मलाई के लाग्छ भने भित्रै बसेर मजाले किताब लेख्न पाए हुन्थ्यो, [विस्तृतमा...]
असार ११,काठमाडौं। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष दुबै नियम र संगतले नमिलेकाले अवैध रहेको नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले बताएका छन्। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको बजेट अधिवेशन उद्घाटन गर्दै नेता साहले हेटौँडा अधिवेशनपछि कुनै अधिवेशन नभएको र हेटौँडामा अधिवेशन भएको पार्टीको नाम नेकपा माओवादी केन्द्र नै नभएको स्पष्ट पार्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको पार्टीसित एकीकरण गरिएको तथा एकीकरण भएपछि कुनै अधिवेशन नै नरहेको हुनाले पार्टीको नाम र अध्यक्ष दुवै अवैध [विस्तृतमा...]
पुस ९,काठमाडौं। पूर्वी नवलपरासीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका कार्यकर्ताले बिथालेका छन्। नेकपा गैंडाकोट नगर कमिटीले बुधबार दिउँसो आयोजना गरेको भेला ओली पक्षधरले नाराबाजीसहित बिथोलेका थिए। भेलामा दाहाल–नेपाल पक्षधरलाई बोलाएर पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्य राखिएको थियो। कार्यक्रममा एउटा पक्षलाई मात्र राखिएको भन्दै ओली समर्थकले नाराबाजी गरेर कार्यक्रम गर्न दिएनन्। यसैबीच [विस्तृतमा...]
असोज २८,काठमाडौं। कुनै बेला थियो, देशमा प्रचण्डले चाहँदा कोही प्रधानमन्त्री बन्थ्यो र हट्थ्यो पनि । अहिले एउटा सचिव बनाउने र मन्त्री हटाउने स्थिति छैन। ०६६ सालमा झलनाथ खनाल, ०६८ सालमा बाबुराम भट्टराईदेखि ०७२ मा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने दुबै खेलका सूत्रधार प्रचण्ड अहिले आफूसरहकै अध्यक्ष केपी ओलीसँग दिनैपिच्छे तारिख धाएझैँ वार्ता गरिरहनुभएको छ । उहाँको चाहना छ कि, केही मन्त्री हेरफेर गरौं । तर, न केपीले चाहेर कोही मन्त्री थप्न र निकाल्न सक्नुभएको छ, न प्रचण्डले। चाहँदा [विस्तृतमा...]
असोज ७,काठमाडौं। बितेको ४–५ महिनाभित्रै नेपालको राजनीतिमा ‘ना रहे बाँस, ना बजे बाँसुरी’ भनेजस्तो रणनीति बन्दै रहेछ । तर, पञ्चायतका उदार र अनुदार पञ्च भनेजस्ता प्रधानमन्त्रीको कोटरीका दुईखाले तत्वबीचको तीव्र अन्तरविरोध, अनि शीर्ष नेताको सम्झौताले देशले व्यहोर्नै लागेको अनिष्टबाट मुक्ति पाएको खुलासा भर्खरै भएको छ। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के–के र कस्ता–भित्री सम्झौता गर्नुभयो भन्ने कुराको घुनपुत्लो केलाउने क्रममा यस्तो कुराको खुलासा [विस्तृतमा...]
साउन २१,काठमाडौ। मलाई अचम्मचाहिँ के लाग्न थाल्यो भने, तपाईंहरूजत्तिको नेता भनिएका मान्छे नेता नभएर दासजस्तो किन हुनुभा’छ ? शुरुमै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अरु दिनभन्दा फरक किसिमले यसरी भएपछि पहिला शंकर पोखरेलले जवाफ दिए, ‘यो डेडलक खुलाउने सन्दर्भका विषयहरूलाई जे–जसरी अर्थ लगाए पनि आखिरमा हामीले चाहेको, तपाईंले चाहेको कुरा एउटै न हो, निकास…।’ अनि, प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेलतिर हेरेर भने, ‘तपाईं त पार्टीको महासचिव हो नि ! महासचिवको जस्तो भूमिकामा आउनुप¥यो ।’यसरी पार्टीका [विस्तृतमा...]
असार ३१,काठमाडौं। ‘संसदीय दलमा तपाईंहरूको पक्षमा चार–पाँचजना बढी होलान्, तिनलाई म तानिहाल्छु’ चितवन जानुअघिको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यति कुरा भनेपछि प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिए। अनि, शंकर पोखरेलचाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, पार्टी अध्यक्ष छोडाउनेजस्ता केही कुरा नगरौँ, मिलाएर लैजाऔँ भन्दै अर्को पक्षका नेतासँग कुरा गर्न सक्रिय भए। बरु, छिटो महाधिवेशन गर्ने भन्ने थियो, उनको जोड। उनले कुरा गरेका नेतालाई आश्वस्त पारे– प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन, पार्टी विभाजन यस्तो केही पनि [विस्तृतमा...]
चैत ५,काठमाडौं। ‘तपाईंहरुको दबाब भनौँ कि, सदाशयता मानौँ, कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा काम गर्ने भन्ने (कुरा) भयो। तर, अहिले लाग्दैछ म कार्यकारी हुँ कि हैन।’ अस्ति पूर्वएमालेका केही नेतासहित खुमलटारको एउटा जमघटमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो कुरा सुनाएपछि एक आपसमा हेराहेर गर्नुबाहेक विकल्प थिएन। ‘त्यही त के गरेको होला यस्तो ?,’ एक जना नेताले आश्चर्य त प्रकट गरे, तर आश्चर्यमा चाहिँ सबभन्दा बढी प्रचण्ड नै परेको व्यक्त भावले बुझाउँथ्यो। उनले भने, ‘बामदेवजीकै कुरामा पनि त संस्थागत निर्णय भएको [विस्तृतमा...]
केपीले एकलौटी खानुभन्दा प्रचण्डतिरै दिनु बेस !
माघ २२,काठमाडौँ। केही घटनाक्रम हेरौँ – नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि छलफल गर्न १५ समूह बने। तीमध्ये साढे आठ समूहको टोली नेता पूर्व माओवादी र साढे ६ वटा समूहको टोली नेतामा पूर्व एमाले खुम्चियो। त्यसमध्ये एउटा टोलीमा दुई नेता चयन गरिँदा आधाआधाको हिस्सा भएको हो। पूर्व एमालेभित्र केपी ओली–माधव नेपालका अलग अलग ढिक्का कित्ता ! पेलाई वा अति निषेधपछि बरु नेतृत्व र अवसर प्रचण्डहरुमै जाओस् भन्ने माधव समूह पुगेको देखिन्छ। र, अर्को वर्ष हुने भनिएको महाधिवेशनमा पनि यही [विस्तृतमा...]
भदौ ६,काठमाडौं। पार्टी एकीकरण भएको पन्ध्र महिनापछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी भूमिका पाएका छन्। एकीकरण पूर्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति पन्ध्र महिनापछि कार्यान्वयनमा आएको हो। बिहीबार बसको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक बोलाएर पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्वाथ्योउपचारका लागि सिंगापुर जाने भएकाले प्रचण्डको अध्यक्षमा चाँडै सचिवालय बैठक बसेर [विस्तृतमा...]